Iindaba - Ndabuyela umva kwiminyaka eliwaka eyadlulayo ndaba ngumcuphi
Ndabuya iminyaka eliwaka eyadlulayo ndaba ngumcuphi
Xa ndandisengumntwana, ndandinqwenela ngokukhethekileyo ukuba ndibenguye Conan, ephethe umpu wakhe wokubukela wohlobo olufanayo, kwaye emva kokudubula omnye umntu, ndaphola ndathatha umbhobho wesitya, emva kokuqiqa okungqongqo, ndathi: "Inye kuphela inyaniso."
Ukukhula kwam ndandibawela UKogoro Akechi phakathi Edogawa Ranbu. Ayikuko kuba ndiyathanda ukuqiqa, kodwa kuba kupholile ukubhengeza indlela yokusebenza yabanye abantu.
Ukuba ukuqiqa kweJapan kugcwele ukuthanda izinto ezingaqhelekanga nezingaqhelekanga, ukuqiqa kwaseMelika kundinika imvakalelo yokuba i-burger + izinja ezishushu-zimnandi, kodwa ubushushu buqhuma.
Umzekelo, Ukuncitshiswa kwencwadi yomsitho. Kwimbono yam, lo ngumdlalo ofuna ukuskena rhoqo iikhowudi ze-QR, imikhondo kunye namaqhalo. Ngexesha lomdlalo, ndade ndenza umdlalo weqonga waseMelika.
Kodwa into ebendingayilindelanga kukuba kulo nyaka igosa libhengeze inyathelo elikhulu: imisebenzi emitsha yapapashwa ngaxeshanye.
Lo mdlalo ubizwa ngokuba Uthotho lweMillennium, Inenguqulo yakudala ye 1400, Inguqulelo yale mihla 1900 kunye nohlobo lwecyberpunk 2400.
Imvelaphi engokwembali yomdlalo isetelwe kubukhulu beminyaka eliwaka, kudityaniswa nokwandiswa kwexesha, ekugqibeleni kungahamba le midlalo mithathu ukusombulula imfihlakalo enkulu.
In Bloom, akayintyatyambo
Hazy, akayena inkungu
Kwinguqulelo yamvanje yenguqulo yaseTshayina ye Inkolelo kaK Knight: 1400, udlala i-knight egama UAbra Levy, onobuchule obufanayo boku Isebe: uphupha amaphupha angaqhelekanga. Ephupheni, ubonakala ngathi uyakwazi ukubona ezinye iziqwenga zexesha elidlulileyo nezexesha elizayo. Ngobu buchule, waba ngoyena mcuphi ubalaseleyo kumaXesha Aphakathi kwaye wasombulula iimeko ezininzi.
Umdlalo wahlulwe wabhalwa ngoonobumba abane: Isahluko esilahlekileyo, ukuhlamba umphefumlo, ukukholelwa okuqinisekileyo kunye nokukhanya okuMnyama. Ubunzima beskripthi ngasinye sonyuka ngokulandelelana. Qala i-app kwaye ungaqala umdlalo. Ngokubanzi, iInkolo ka Knight ahlukile kakhulu kuhlelo lwangaphambili. Zisetyenziselwa ukucacisa ubudlelwane phakathi kwazo ngokundwendwela iindawo ezahlukeneyo, abantu, kunye nezinto.
Kodwa umahluko kukuba inqanaba le Inkolo ka Knight uvukile. Okokuqala, imephu yahlulwe yangamacandelo amathathu: indawo ebomvu ibonisa imiboniso onayo, oluhlaza okwesibhakabhaka umele izinto ozaziyo kodwa ongazifumananga, kwaye ujongano lomlinganiswa lolwabantu obaziyo kodwa ungayazi indawo ethile.
Ungalibali ukuba kwifayile ye- Ukuncitshiswa kwencwadi yemicimbi, ixesha lihamba kancinci. Ngalo lonke ixesha ubuza umlinganiswa okanye uskena into, iya kongeza imizuzu emi-5 kuyo, kwaye kuya kuthatha imizuzu engama-20 ukuya kwindawo entsha. Sukuyijongela phantsi impembelelo yexesha, yile ndlela ifuthe lebhabhathane eliza ngayo. Ixesha kumdlalo liya kubangela nezinye izehlo. Umzekelo, enye yezinto ibiwe okanye kwenzeka enye into yokubulala.
Ixesha lichaphazela izinto ezimbini: ukukhawuleza ukusombulula ulwaphulo-mthetho, amanqaku aphezulu ekupheleni komdlalo; abalinganiswa kumdlalo bagcina ixesha eliqhelekileyo. Umzekelo, ezinzulwini zobusuku, awukwazi ukubandwendwela abalinganiswa abathile. Ngamanye amaxesha, abalinganiswa kumdlalo abayi kukuvumela ukuba umvavanye ngokulula, kwaye unokufuna ukunyoba.
Njengoko intetho isitsho, uthembele kubazali bakho ekhaya, kubahlobo bakho xa uphuma, nakubuzalwana bakho eParis (akukho lizwi linjalo). Kumdlalo, unezihlobo ezithathu ezithembekileyo ezenze impumelelo kumacandelo ahlukeneyo. Kwimeko nganye, unokufumana imikhondo engaqondakaliyo ngokubuza izihlobo.
Umalume wakho uyimonki kumzi woonongendi, onobuchule kumaxwebhu ahlukeneyo, ke ngoko unokumfumanela imikhondo enxulumene nephepha; Udade wakho ungumrhwebi onobuchule kubutyebi obahlukeneyo, ke unokumcela imikhondo enxulumene nezinto zakudala; umntakwenu uyimpimpi, uyabazi abantu kwimisebenzi eyahlukeneyo eParis.
Ukongeza, kukho iqabane elibalulekileyo kumdlalo-igreyhound IParsifah. Inokufumana umnini wento ngokurhwaphiliza ubungqina. Xa usiskena ukuvumba into, uya kuphendula ngolu hlobo lulandelayo: akukho livumba lomntu; Inuka ize ibalekele komnye wabo; Ivumba kodwa alikwazi ukwahlula, njl.
Ukongezwa kwezinja kubonakala ngathi kuzisa ulonwabo kumdlalo, kwaye uziva ngathi kukho umncedi ongcono. Ukuvela kweIParsifah kubonakala ngathi iyaqhubeka nokuqinisekisa umxholo: kwiminyaka eyi-1400 ekude, ngaphandle koncedo lwe-high-tech, inja ibonakala ngathi sisixhobo esinamandla.
Ukuphupha ndibuyele eParis
Umdlalo Inkolo ka Knight uye wafumana uhlaziyo lwe-epic ngokobugcisa, ubugcisa kunye noomatshini. Ayigcini ngokugcina oomatshini abaphambili, kodwa ikongeza ezinye iisetingi ezinomdla zokuzisa abadlali amava amatsha (ngaphandle kwabonakalisi).
Ibali: Umbhali oselula wabulawa estudiyo, kwaye uluhlu lwezinto ezikhokelayo ezazikhokelela kuyo zazinzima kakhulu, kwaye isiphelo somntu omncinci siboniswa njani kwiminyaka yobudala? Umdlalo ubeka imeko yebali eParis. Yayinjani idolophu eParis ngo-1400 AD?
Umfanekiso: Ubugcisa emdlalweni buyancomeka ngokwenene. Ngekhadi lamaphupha, ndibonakala ngathi ndiyakwazi ukubona izithunzi zemiboniso. Izakhono zobugcisa ezigqwesileyo zabazobi zibuyisela imifanekiso ebalulekileyo kumdlalo womdlali kwaye uqhagamshele imikhondo yebali.
Ukubambisana: Nangona umdlalo uphawule abantu aba-1-4, ndicinga ukuba abantu aba-2 babonakala bengumdlalo ogqibeleleyo. Yahlukile kwimidlalo yokubaleka enjeUkukhangela okukhulu kwaye Ixesha eliMiselweyo lokuGcina ixesha, Ukuncitshiswa kwencwadi yomsitho kufana nebhodi yomdlalo webhodi "yeScript sokubulala". Unamasebe amaninzi. Kuya kufuneka uqhubeke ubuza imibuzo kwaye utshintshe abalinganiswa emva naphambili. Ukufumana ubudlelwane obunengqiqo. Ke ngoko, ifuna intsebenziswano, kwaye kufuneka abantu abaninzi ukufumana imikhondo. Kodwa okukhona bebaninzi abantu, abadlali abazakuziva bebandakanyekile. Ke, umdlalo phakathi kwezi zimbini ubonakala ungoyena ugqibeleleyo.
Ixesha lokuposa: Jul-31-2021
Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni, Idayisi yesiNtu, Ikhadi lemikhono, Amalaphu Umdlalo weBhodi, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo,